Nintendo's casriga casriga ee ciyaaraha ayaa noqon kara mid dhow Androidsis
Rafa Rodriguez Ballesteros | | Mobiles, Noticias
Waxaan leenahay aad soo bandhigid dhowaan oo ah nooca labaad ee Shark Madow laga bilaabo Xiaomi. Oo waliba waxay u muuqataa taas Shirkadaha kale waxay qarka u saaran yihiin inay soo bandhigaan taleefannadooda casriga ah ee loogu talagalay cayaartoyda. Qeyb wali sii kordheysa oo noocyo badan oo badan ay rabaan inay ku biiraan.
Iyo mawjad cusub oo taleefannada gacanta ah oo loogu talagalay dhagaystayaasha «gamer» ka badan mar labaad ayuu u dhawaaqayaa xanta aan jecel nahay. Sida muuqata, Nintendo wuxuu horumarin lahaa taleefankiisa casriga ah taasi xitaa waxay arki kartaa iftiinka sanadkaan.
1 A casriga Nintendo lahaa soo dhaweyn lahaa by badan
2 Smartphone-ka Nintendo ee lagu kabayo Bedelka
A casriga Nintendo lahaa soo dhaweyn lahaa by badan
Kuwa jecel qunsuliyadaha iyo ciyaaraha fiidiyowga, xaqiiqda ah in Nintendo si ay u sahamiso adduunka casriga ah waxay noqon laheyd war wanaagsan. Shirkad xiriir la leh tobanaan sano oo loogu talagalay tacsiyeynta iyo madadaalada, taasina waxay leedahay tikniyoolajiyad ku filan iyo karti. Taasna wuxuu abuuri karaa taleefan awood u leh inuu ka tartamo boos sare, ugu yaraan qaybta ciyaaraha.
Marka la eego koorsada ay dejisay barmaamijka cusub ee Google ee ciyaaraha, Stadia, qalabka wax lagu iibiyo waxay yeelan doonaan sumcad yaraan iyo yaraan. Laakiin haysashada qalab ay soo saartey halyeey soosaara halyeeyada ciyaaraha iyo qalabka wax lagu xiro ayaa damaanad qaadi kara khibrad isticmaale wanaagsan. Wax dadka isticmaala telefoonka "ciyaaraha" qaarkood ay ka cawdaan.
Iyo sidoo kale filasho la soo saaray iyo xiiso u leh waxa Google ku sameyn karo qunsuliyad. Kuwaas oo aan muddo dooneynay inaan aragno. In kasta oo ay na tuseen waxa ay yiraahdeen waa mustaqbalka ciyaaraha fiidiyowga. Sidoo kale waxay soo saartaa xiiso badan oo ka mid ah cayaartoyda iyo isticmaaleyaasha taleefannada casriga ah waxa Nintendo ay ku soo bandhigi lahayd suuqa.
Smartphone-ka Nintendo ee lagu kabayo Bedelka
Taleefanka casriga ah ee Nintendo wuxuu noqon karaa kaabe ku habboon Nintendo Switch console. In kasta oo aysan dhaafin xogta ku saabsan sida midowgan wax ku oolka ah ee u dhexeeya konsol iyo taleefanka gacanta uu u noqon karo. Fikradda ayaa noqon lahayd hagaajinta khibrada isticmaalka barnaamijyada kale, marka laga reebo ciyaaraha, sida shabakadaha bulshada. Tan iyo markii aad ku dhex baareysid internetka kombiyuutarrada ciyaarta ayaan gebi ahaanba si fiican isugu dhafan xaaladaha qaarkood.
Way fiicnaan laheyd inaad waxbadan ka ogaato daahfurka male-awaalka ah ee hubaal yeelan lahaa guuto raacsan. Waxaa laga yaabaa in Nintendo uu horey u heystay tiknoolajiyad ku filan oo taleefanka casriga ah looga dhigo fiidiyoow fiidiyoow ah oo si buuxda u shaqeynaya iyada oo aan xaddidaadda ay soo bandhigi karaan Ma jiro war rasmi ah oo ka soo baxay Nintendo ilaa maanta, waxaan rajeyneynaa inaan si dhakhso leh wax ugusheegi karno.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Nintendo's casriga casriga ee ciyaaraha ayaa noqon kara mid dhow